HEVC kana H.265 vhidhiyo ndiyo nyowani vhidhiyo codec iyo inovimbisa tsoka diki apo ichiendesa mune yakakwira-resolution vhidhiyo (kureva. 4K vhidhiyo haisi 4 nguva pane 1080p mavhidhiyo). Kuti utambe iyi mhando yevhidhiyo, unoda codec nyowani isingabude mubhokisi nayo Windows 10.
Vhidhiyo codec inobvumira iyo app kuti iverenge uye iratidze mafaera akasiyana akaiswa nekodhi yakatarwa. Kwedu, iyo HEVC codec inodikanwa kuti itambe H.265 mavhidhiyo akanyorwa. Paunoyedza kutamba vhidhiyo yeH.265 ne Windows 10, OS yaizokurumidza ndokukumbira iwe kuti utenge HEVC Vhidhiyo Yekuwedzera iyo inodhura $ 0.99 kubva kuMicrosoft Store.
Kuti utambe iyi vhidhiyo, unoda codec nyowani. Codecs inobvumidza iyo app kuverenga uye kutamba mafaera akasiyana Dhawunirodha iyi codec kubva kuMicrosoft Store.
Kana iwe ukatevera chinongedzo iwe uchaunzwa kune ichi peji.
Asi pane imwezve YeMicrosoft Chitoro HEVC yekuwedzera iyo iripowo kuti iwe utore iwe unongofanira kuenda kunotsvaga kana kutevera kubatana uku. Izvi zvinokutungamira iwe kune iyo peji rakanzi "HEVC Vhidhiyo Yekuwedzera kubva kuMugadziri weDhijitari" uye mahara kuisa.
Microsoft ichisiya sarudzo yeOEM yekuisa nyowani Windows 10 muchina une HEVC vhidhiyo codec pre-yakaiswa. Uye izvi sezviri pachena zvakavhurirwa vese kwete chete zveeOEMs chete.
Paunenge iwe waita izvo iwe unokwanisa kukwanisa kutamba H.265 mavhidhiyo uye netarisiro gwara rino richakuchengetera iwe $ 1 dhora iwe. Nakidzwa!
The post Tora HEVC (H.265) Vhidhiyo Yekuwedzera codec Yemahara Windows 10 yakatanga kutanga Inotevera ya Windows.
WinX HD Vhidhiyo Inoshandura Deluxe inoshandura HEVC kuita MP4 uye nezvimwe mu Windows 10